Sawirada xusuusta ee sumadaha caanka ah ee daraasad lagu sameeyay | Abuurista khadka tooska ah
Astaamaha ayaa loo bartay matalaan qayb ka mid ah qiyamka sumadda Waxaana loogu talagalay qaab aan awoodno inaan si dhakhso leh u xasuusano badeecada ama adeegga shirkaddaas gaarka ahi iibiso. Astaanta waa in si fudud loogu xasuustaa maskaxda qofka, si loo sameeyo shaabad maskaxeed oo si dhakhso leh ula xiriiri karto badeecadaas ama adeeggaas.
Websaydh lagu magacaabo Signs.com ayaa sameeyay tijaabo taas oo ah waxay qaadataa 156 qof oo Mareykan ah waxayna ku xujeysaa inay sawiraan 10 astaamo caan ah saacad iyo badh. Kaliya waxay u jeesan karaan xusuustooda si ay gacantooda ugu sawiraan qaar ka mid ah noocyada caanka ah sida Adidas, Burger King ama Starbucks.
Waa la xushay 156 Mareykan ah oo da'doodu u dhaxeyso 20 ilaa 70 sano si ay saacad iyo badh gudahood ugu sawiraan astaamahaas. Sidan oo kale, tijaabo ayaa loo qaaday si loo arko saameynta astaamaha sumadaha caanka ah ay nagu leeyihiin.
Ka mid ah astaamaha la sawiray waxaa jira dad u heellan adduunka naqshadeynta, gaar ahaan maadaama ay jiraan qaar si wanaagsan loo qabtay. In kasta oo waxa xiisaha leh ay tahay in madaddaalada saxsanaanta weyn, waa kuwa lagu sameeyay muuqaal fudud.
Sidoo kale waa wax aad u xiiso badan, taasina waxay ku tusineysaa muhiimadda dhinacan ay u leedahay qaabeynta astaan iyo qiimaha ay ku kici karto si mid looga sameeyo xoq, waa sida inta badan kaqeybgalayaasha daraasaddan si fiican u xusuusnow midabada isku mid ah. Kaliya boqolkiiba 80 ayaa awooday inay adeegsadaan midabada astaanta rasmiga ah ee shirkadda.
Way cadahay taas way ka sahlan tahay in la xasuusto midab ka badan qaab gaar ahaan, laakiin waxay u adeegtaa si loo muujiyo muhiimadda xulashada caqliga leh ee midabada naqshadeynta astaanta astaanta. In kasta oo daraasadda la qaaday ay aad u yaraayeen, haddana waa mid si fiican waxtar u leh in la ogaado saamaynta ay calaamadaha astaamahoodu ku leeyihiin dadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Waa tan sida 156 qof ay uga soo qaataan astaamaha astaanta caanka ah xusuusta
Buugaag kala duwan oo loogu talagalay dadka jecel hal-abuurka